सुचना/प्रबिधि – Page7– rastriyakhabar.com
सियोल । विश्व प्रसिद्ध विद्युतीय सामग्री उत्पादन कम्पनी सामसुङले बुधबार पाँचौं पुस्ताको इन्टरनेट (फाइब जी) चल्ने ग्यालेक्सी ट्याब सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार ग्यालेक्सी ट्याबमा १०.५ इन्चको ओलेड डिस्प्ले, एकेजी एकस्टिक र क्वाड स्पिकर रहेको छ । साथै, यसले ४के प्रशारण स्ट्रिमिङ र एआर..
पत्रकारको ‘लाइसेन्स जाँच’ प्रावधान हटाउन महासंघको माग
काठकाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको पत्रकार बन्न लाइसेन्सको जाँच लिने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले पत्रकारको लाइसेन्स जाँच लिने प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको जनाएको छ । महासचिव..
वाइफाई एउटा ताररहित रेडियो वेब प्रविधि हो । जसका माध्यमबाट इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुले वेब एउटाबाट अर्कोमा आदान–प्रदान गर्छन् । प्रविधिको विकाससँगै वाइफाई मानिसको आवश्यकता बन्दै गएको छ । तसर्थ, पछिल्लो समयमा वाइफाई चोरी हुने भइराखेको हुन्छ । यसबाट बच्न वाइफाईको पासवर्डलगायत केही कुरामा ध्यान दिन..
नोजाका अध्यक्ष ढुंगानाले सरकारलाई भने ‘सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ’
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि विधेयकप्रति राष्ट्रिय अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको छ । लेखेकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन मिडियामार्फत गरिने कतिपय अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई कसुर..
फेसबुक म्यासेन्जरमा अटो म्यासजे जाने भाइरस आतंक
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको म्यासेन्जरमा अहिले एउटा ‘म्यासेज’ भाइरल बनेको छ । वास्तबमा त्यो म्यासज तपाईको साथीले पठाएको होइन । उसले त्यो म्यासेज खोलेको मात्र हो, त्यो पनि झुक्किएर । अर्थात थाहा नपाएर । तपाईंको फेसबुक म्यासेन्जरमा साथीको सरप्राइज म्यासेज भन्दै म्यासेज आइरहेको होला । साबधान..
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखामा डा.राअहिराजको ५१ हजारको अक्षयकोष स्थापना
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखामा डा.राजेश अहिराजले ५१ हजारको अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको हो । मधेश मामिला जानकार डा. राजेश अहिराजले नेपाल पत्रकार महासङ्घ महोत्तरी शाखामा ‘रामचन्द्र मिश्र स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ स्थापना गर्नुभएको हो। विसं २०४६ सालमा सद्भावना परिषदका संस्थापक रामचन्द्र..
तपाईंले अहिले यो समाचार के बाट पढ्दै हुनुहुन्छ ? मोवाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटर ? तपाईंले जेबाट पढिरहेको भएपनि दैनिक प्रयोजनमा तपाईं कम्प्युटर प्रयोगकर्ता भए सहज रुपमा काम गर्न केहि Shortcut Keys जान्नुपर्ने हुन्छ । केही ससाना कुरामा मात्रै ध्यान दिए पनि चलाउन सहज लाग्दै जान्छ। चलाउदाँ चलाउदै धेरै सिक्न पनि..
मोबाइल फोनका भ्रम र सत्य ! गोजीमा राख्दा बाँझोपन हुन्छ ?
अहिले स्मार्टफोन मानिसहरुको जिवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । विश्वमा मानिसहरुको संख्या भन्दा मोबाइल फोनको संख्या बढी भेसकेको छ । तर पनि स्मार्टफोनका विषयमा विभिन्न खाले अफवाह तथा भ्रान्ति वा गलत बुझाइहरु छन् । यस्ता भ्रान्तिहरुको वास्तविकता नबुझिकन हामी पनि हल्लाको पछि लाग्दछौँ र डराउछौँ..
गर्भवती महिलाले घण्टौँ मोबाइल फोन चलाउनु खतरा, कारण थाहा पाउनुहोस्
एजेन्सी । पछिल्लो समय सूचना–प्रविधिको विकाससँगै आएको स्मार्टफोन हाम्रो जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ । जसका कारण हामी चाहेर पनि मोबाइललाई आफ्नो जीवनबाट टाढा राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छौँ । बालबच्चा, युवादेखि वृद्धवृद्धासम्मको हातमा मोबाइल फोन भएकै हुन्छ । धेरैजसो मानिसमा मोबाइल..
फेसबुकलाई नै चुनौती दिने विकिपीडियाको नयाँ सामाजिक सञ्जाल, प्रयोगकर्ता हजारौं
एजेन्सी । विकिपीडियाका संस्थापक जिमी वेल्सले आफ्नो नयाँ समाजिक सञ्जाल डब्ल्यूटी:सोशल (WT:Social) मा अहिलेसम्म एक लाख ६० हजारभन्दा बढी सदस्य भएको बताएका छन्। सो सामाजिक सञ्जालले कहिल्यै आफ्ना प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क नबेच्ने र विज्ञापनबाट नभई व्यक्तिगत चन्दादाताको उदारतामा भर पर्ने बताएको..
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिलाई पारदर्शी ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीका कामलाई पारदर्शी ढङ्गले..
फेसबुकले हटाइदियो ३ करोड ३ लाख पोस्ट, तपाइँको त परेन ?
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले हालैका दिनमा ३ करोड ३ लाखभन्दा बढी पोस्ट हटाएको जनाएको छ। फेसबुकका अनुसार करिब एक तिहाइ सामग्री बालउत्पीडनसँग सम्बन्धित हानिकारक पोस्टहरु रहेका छन् । फेसबुकका अनुसार ती सामग्री सन् २०१९ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म हटाइएको हो । उक्त अवधिमा हटाइएका सामग्रीमध्ये १..
सावधान! मोबाइलको लतले बच्चामा हुनसक्छ ‘गेमिङ डिसअर्डर’
अचेल अधिकांश बच्चाहरुमा मोबाइलमा झुण्डिने लत हुन्छ । यतिसम्म कि रुँदा, कराउँदा, खाना ख्वाउँदा लगायत अनेक अवस्थामा बच्चाहरुलाई मोबाइल दिनुपर्छ । यसरी मोबाइलमा भिडियो हेर्ने, गेम खेल्ने बालबालिकामा मानसिक रोग अर्थात गेमिङ डिसअर्डरको समस्या हुनसक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । पछिल्लो पुस्ताका..
एजेन्सी । गो प्रोले बुधबार दुई नयाँ एक्सन क्यामेरा सार्वजनिक गरेको छ । ‘हिरो–८ र गो प्रो म्याक्स एक्सन’ दुई वटा मोडेल भारतीय बजारमा ल्याएको हो । हिरो–८ ब्लाकलाई हिरो–७ ब्ल्याकको अपग्रेड भर्सनको रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तै, गो प्रो म्याक्सलाई गो प्रो फ्युजनको अपग्रेड भेरिएन्टका रुपमा ल्याइएको..
काठमाडौं । ल्यापटक तथा कम्प्युटर मानिसहरुका लागि अनिवार्यजस्तै हुन्छ । प्रविधिको जमानामा आफ्ना कामहरुलाई छिटो–छरितो र गुणस्तरीय बनाउन यी वस्तुहरु अनिवार्यजस्तै हुन्छन् । ल्यापटपका केही विशेष कुरामा ध्यान दिइएन भने हतारको निर्णयले पछुताउनु शिवाय केही हुँदैन । पैसाको नास एकातिर हुन्छ भने अर्को..